Fursadaha Shaqada - Daryeelka Bulshada ee Ururka Shaqaalaha Fursadaha Shaqada - Daryeelka Bulshada ee Ururka Shaqaalaha
Hadafkayagii, aragtideena, & qaabka daryeelka
Ururka Daryeelka Bulshada, ujeeddadeenu waa in aan kicinno sinnaanta iyada oo loo marayo daryeelka caafimaad ee uu bukaanku hoggaamiyo kaas oo soo dhaweynaya oo xoojinaya bulshooyinkeena annaga oo isku dhejinaya jidhka, maskaxda, iyo wadnaha iyada oo loo marayo 360 daryeel - daryeel jirro degdeg ah, taageerada caafimaadka dabeecadda, taageerada bulshada, daryeelka caafimaadka qoyska, daryeelka ilkaha, Oo ah Farmasiga -Dhammaan isku aag ama ku dhow 11ka goobood ee Lancaster & Lubnaan oo dhan.
Waxaan aragnaa bulshooyin firfircoon oo caafimaad qaba oo ay taageerayaan daryeel caafimaad oo loo dhan yahay kuwaaso soo dhaweynaya dhaqankooda, baahiyaha iyo qiyamka bukaan kasta, oo ku dhiirranaaya inay sameeyaan doorashooyin caafimaad leh oo hurinaya wanaaggooda iyo wanaagga kuwa kale.
Waxaan aaminsanahay caafimaadka oo dhan. Tani waxay ka dhigan tahay inaan wax ka qabanno oo aan bogsiino cudur laakiin si isku mid ah muhiim u ah, waxaan ka shaqeynaa sababaha keena, dhibaatooyinka bulshada ee ay tahay in wax laga qabto si loo gaaro sinnaan dhab ah.
Waanu maqalnaa, baranaa, oo aanu isku duubnaanaa nolosha adag iyo xoogga gaarka ah ee bukaannadayada, waxaanan si adag uga shaqaynaa sidii aan u jebin lahayn dhammaan caqabadaha daryeelka. Tani waxay ka dhigan tahay in aan ka eegno lenska asalka ah. Waxaan la xiriirnaa bulshadayada sababtoo ah annaga waa bulshadeena. Mid kasta oo naga mid ah waa deris, saaxiib, xubin qoys, iyo wadajir, waxaan nahay xarun caafimaad oo bulsho oo la aamini karo.
Waan ku aragnaa!
Waan fahamsanahay Ujeeddadayada oo ah xarun caafimaad oo geesinimo leh & xididdada hoose iyada oo loo marayo 360 daryeel.
Waxaan maalgashannaa agabkayaga shaqaalaha iyada oo loo marayo mushaharka, faa'iidooyinka, gunnada, iyo maalgashiga kale ee shaqaalaha.
Waan ognahay Muhiimadda jadwal shaqo oo dabacsan & isku-dhafan.
Waxaan leenahay kooxo isku xidhan & awood la siiyey-waxaan fahamsanahay sababta shaqadeenu ay muhiim u tahay,waxaanu ku raaxaysanayna shaqadeena,waxa aynu taageernaa midba midka kale shaqadiisa,waxa aanu aragnaa saamaynta iyo qiimaha shaqadeena wadajirka ah-bukaanka caafimaadka qaba iyo bulshooyinka firfircoon.
Waan ku aragnaa, shaqadaaduna way nagu dhiiri gelisaa. Waxaan jeclaan lahayn inaad codsato inaad ku biirto kooxdayada!
Waxaan sidoo kale bixineynaa wareysiyo ku-meel-gaar ah dhammaan boosaska furan Jimce kasta laga bilaabo 10 subaxnimo - 12 galabnimo xafiiskayaga maamulka, oo ku yaal 812 North Prince Street, Lancaster.
Care Community Care waa Loo-shaqeeye Siman.